Salaamanews » Shabeellaha dhexe: ciidamada dowladda oo goobo hor-leh qabsaday
Home » Warar Shabeellaha dhexe: ciidamada dowladda oo goobo hor-leh qabsaday Print - Daabace: SalaamaNews - Feb 20th, 2013 // Ka Jawaab	Qoraallo La Xiriira
Madaxweyne Xasan Sheekh oo si kulul uga hadlay suuq xumida SoomaaliyaWafdi uu hor socday gudoomiye Jawaari oo gaaray BaydhabaSoomaalidii oo ka cararay Xudur markay al-Shabaab gacanta ku dhigtaySoo dhaweynta wafdiga dowladda ee Kismaayo ayaa muujisay inaanu khilaaf jirin (xog)Soomaalida oo dhalleeceeyay xarigga ay al-Shabaab ee macalimiinta Qur’aanka
(Salaamanews)-Cutub ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo sahan ahaan loo diray ayaa lagu soo warramayaa inay maanta gaareen magaalada Mahaddaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe kaddib markii ay halkaas isaga baxday kooxda al-Shabaab.
Dad ku sugan magaalada Mahaddaay ayaa sheegay inay arkeen ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliya oo lug ku soo galaya magaalada.
Ciidamada ayaa lagu arkay deeganaka Buurane oo 25 km waqooyi kaga beegan degmada Jowhar ka hor intaaney soo gelin gudaha degmada Mahaddaay.
Wararka waxay intaas ku darayaan in qaar ka tirsan dadka deegaanka ay soo dhoweeyaan ciidanka dowladda.
Weli lama oga in ciidanka maanta galay Mahaddaay ay dagi doonaan magaalada si ay sugaan ammaanka magaalada.
Waa markii labaad oo ciidan ka tirsan dowladda oo saahan ahaan loogu arko saddexdii maalmood ee u dambeeyay.
Maleeshiyada al-Shabaab ayaa la sheegayaa inay u carartay deegaannada miyiga ah, iyadoo ka cabsaneysa weerar ugaga yimaada ciidanka dowladda.
Kooxda al-Shabaab oo awood ahaan sii tabar darnaaneysay tan iyo bartamihii 2011 ayaa lumisay inta badan magaalooyinkii ay horey uga talin jirtay.
Tags: warar « Qoraalkii HoreMidowga Yurub oo iskaashi la sameynaya Puntland	Qoraalka Xiga »Muqdisho: Maxkamdeynta wariyaha oo dib loo dhigay	Halkan Hoose ku Jawaab